Maamulka Kililka oo Isku Dayay Inay Hawada Ka Xidhaan Xogta Shacabka - www.xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us Maamulka Kililka oo Isku Dayay Inay Hawada Ka Xidhaan Xogta Shacabka
Published on Tuesday, 16 April 2013 17:21	Xogta Shacabka (Addis Ababa) Xog goor dhawayd naga soo gaadhay Addis Ababa ayaa sheegaysa in xukuumada kililku isku dayayso siday khadka wadanka Ethiopia uga xidhi lahayd boga Xogta Shacabka oo wararkiisa aad loogala socdo Jigjiga. Warkan oon ka helnay dad ku dha dhaw masuuliyiin dawlada Federaalka ka tirsan ayaa intaa ku daraysa in wasaarada Is-gaadhsiinta ee Ethiopia wax ka waydiisay xubno Somali ah oo heer Federaal ah arrimaha boga Xogta Shacabka.
Ilo lagu kalsoonyahey sida ay noo xaqiijiyeen waxay saraakiisha Federaalku baadhitaan ku sameeyeen webka, isla mar ahaantaana ka waayeen haba yaraatee ku xad-gudub dhanka xeerka saxaafada iyo shaqsi cay midna.
Baadhitaanka dawlada Federaalka ayaa waxaa ka danbeeyay sida aan maqalnay warqad ay maamulka kililku u qoreen dawlada dhexe si loo xidho Xogta Shacabka. Xukuumada Cabdi Iley ayaa rabta inaan dadku akhrisanin websaytyo aan ka ahayn kuwa daba dhilifka u ah ee soo qora waxa cakaaranews lagu soo qoro.
Xogta Shacabku nacamle uma aha dad gaar ah kamana soo hor jeedo dad gaar ah, balse wixii ay na soo gaadhsiiyaan ilo-wareedyada noo jooga meelaha kala duwan een ka soo tabino warka, waxaan u soo daabacayanaa si dhex dhexaadnimo ah. Sidaasi darteed, waxaan la socodsiinaynaa cidii xog aan soo daabacnay wax ka tabanaysa inay emailka boga nagula soo xidhiidho, waxaanu u ballan qaadaynaa inaan arrintaa ka qancin doono.
Waxaan u mahad celinaynaa masuuliyiintii heer Federaal ee sida dhex dhexaadnimada leh uga jawaabay su’aalihii laga waydiiyay boga.